कूल खाना व्यञ्जनहरु
बाहिर खाना पकाउँदै
किन मेरो फ्राइड माछा कुरकुरा छैन?
यसलाई सही प्राप्त गर्ने चाल ब्याटरको स्थिरता हो। ... यदि तपाईंको माछाको ब्याटर पकाउँदा पर्याप्त क्रिस्पी छैन भने थोरै तरलले ब्याटरलाई पातलो गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। उचित तापक्रममा तेललाई पूर्व तताउनु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ वा माछाले खाना पकाउँदा धेरै तेल अवशोषित गर्नेछ। …
द्रुत उत्तर: तपाईं भुटेको प्याज कति समयसम्म भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ?
राम्ररी भण्डारण गरिएको, पकाएको प्याज फ्रिजमा ३ देखि ५ दिनसम्म रहन्छ। पकाएको प्याज कोठाको तापक्रममा कति समयसम्म छोड्न सकिन्छ? ब्याक्टेरिया3°F र5°F बीचको तापक्रममा छिटो बढ्छ; पकाएको प्याजलाई कोठाको तापक्रममा २ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म छोडिदिँदा खारेज गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म क्रिस्पी गर्ने…
के तपाइँ जमेको पुतली झींगा फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ?
फ्रिज गरिएको झिंगालाई एयर फ्राइर ट्रे वा टोकरीमा थप्नुहोस्। यदि तपाइँ पुतली झिंगा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू एक तहमा छन्। एयर फ्राइरमा 390 मा 10 मिनेटको लागि पकाउनुहोस्। इच्छा अनुसार सेवा गर्नुहोस्। के म एयर फ्राइरमा जमेको झिंगा राख्न सक्छु? जमेको कच्चा झिंगा प्रयोग गर्दै, ती सबै मा राख्नुहोस् ...
के तपाइँ एक अण्डा फ्राई गर्न Frylight को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
फ्राइलाइटको साथ फ्राइङ प्यान स्प्रे गर्नुहोस् र मध्यम तापमा राख्नुहोस्। फ्राइलाइट स्पष्ट नभएसम्म पर्खनुहोस्, प्यानमा अण्डाहरू क्र्याक गर्नुहोस् र तपाईंको मनपर्ने पकाउनुहोस्। सबै सँगै सेवा गर्नुहोस् र आनन्द लिनुहोस्। के तपाईं स्प्रे तेल संग अण्डा फ्राइ गर्न सक्नुहुन्छ? खाना पकाउने स्प्रेको साथ सानो नन-स्टिक स्किलेट स्प्रे गर्नुहोस्। स्किलेटलाई मध्यम गर्मीमा तातो गर्नुहोस्। अण्डालाई टुक्रा पार्नुहोस्…
तपाईंले सोध्नुभयो: के तपाईं हलचल फ्राइलाई न्यानो गर्न सक्नुहुन्छ?
स्टिभ फ्राइ डिश वा कुनै पनि तरकारीहरू पुन: तताउनको लागि स्टोभ अर्को उत्कृष्ट विकल्प हो। एक तेल थप्नुहोस् र अधिक पकाउनबाट बच्नको लागि कम देखि मध्यम तातोमा खाना पुन: तताउनुहोस्। तपाई पक्कै पनि तताउनको लागि बारम्बार हलचल गर्न चाहानुहुन्छ। के तपाई माइक्रोवेभमा स्टिर फ्राई न्यानो गर्न सक्नुहुन्छ? स्वतन्त्र र युरोपेली खाद्य सूचनाका अनुसार…
कती पटक तपाइँ गहिरो फ्राइ for को लागी वनस्पति तेल को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
हाम्रो सिफारिस: रोटी र पिटेको खानाको साथ, तेल तीन वा चार पटक पुन: प्रयोग गर्नुहोस्। आलु चिप्स जस्ता क्लिनर-फ्राइङ वस्तुहरूसँग, कम्तिमा आठ पटक तेल पुन: प्रयोग गर्न राम्रो छ - र सम्भवतः धेरै लामो, विशेष गरी यदि तपाइँ यसलाई केहि ताजा तेलले भर्दै हुनुहुन्छ भने। के म गहिरो फ्राइ पछि वनस्पति तेल पुन: प्रयोग गर्न सक्छु? हो, तपाइँ यसलाई पुन: प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर…
भुटेको हरियो टमाटर कसरी भण्डारण गर्ने?
भुटेको हरियो टमाटरलाई चिसो हुनबाट कसरी जोगाउने? तपाईं कसरी बाँकी भुटेको हरियो टमाटर भण्डारण गर्नुहुन्छ? एकचोटि तिनीहरू भुटेपछि, म टमाटरहरू तुरुन्तै खान सिफारिस गर्छु। यद्यपि, यदि तपाईंले अवशेषहरू राख्नुभयो भने तपाईंले तिनीहरूलाई तीन दिनसम्म फ्रिजमा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ। पुन: तताउनको लागि, तेलको स्किलेटलाई मध्यम माथि राख्नुहोस् ...
सबै भन्दा राम्रो जवाफ: के uncured बेकन पकाउन आवश्यक छ?
सत्य हो, सबै बेकन उपभोग गर्नु अघि निको हुनुपर्छ। जबकि uncured बेकन अझै पनि निको बेकन छ, यो धेरै फरक प्रक्रिया गुजर्छ। एक प्रक्रिया जुन तपाइँको लागि राम्रो छ र धेरै स्वादिष्ट छ! सरल भाषामा भन्नुपर्दा, अकुशल बेकन बेकन हो जुन सिंथेटिक रूपमा प्राप्त नाइट्रेट र नाइट्रेटहरूसँग निको भएको छैन। के निको नभएको बेकन पकाइएको छ? उक्त…
के तपाइँ पकाएको फ्रेन्च फ्राइज बाट बिरामी हुन सक्नुहुन्छ?
के नपाकेको फ्राइज खानु राम्रो हो ? नपाकेको आलु पूर्णतया काँचो हुँदैन। तिनीहरू आलु हुन् जसमा तिनीहरूको स्टार्च प्रायः भाँचिएको छ, तर पूर्ण रूपमा होइन। यसले तिनीहरूलाई कच्चा आलु भन्दा सुरक्षित बनाउँछ, तर पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। अझै, तिनीहरू पूर्ण रूपमा पकाएको आलुको रूपमा राम्रो छैनन्। के तपाईं कम पकाएको जमे भएका फ्रेन्च फ्राइजबाट बिरामी हुन सक्नुहुन्छ? यदि…
आधा पकाएको पिज्जा कसरी पकाउने?
आंशिक रूपमा पकाएको पिज्जा कसरी पकाउने? आधा पकाएको पिज्जा पकाउने निर्देशनहरू ओवनलाई 400-425 डिग्रीमा पूर्व तताउनुहोस्। ओवनमा नरेप गरिएको पिज्जा राख्नुहोस् र लगभग 8-12 मिनेटको लागि पकाउनुहोस्। जब चीज सुनौलो खैरो हुन्छ पिज्जा गर्नुपर्छ। आधा पकाएको पिज्जा कसरी पुन: तताउने? पिज्जालाई ओभनमा पुन: तताउनुहोस्
पृष्ठ1 पृष्ठ2 ... पृष्ठ883 अर्को →
सबैलाई नमस्कार! म निनेल हुँ र मलाई लाग्छ कि खाना पकाउन मन पराउने मानिसहरू, समय-समयमा फ्राइ, उमाल्ने र भाप मात्र होइन, स्वादिष्ट खाना बिना बाँच्न सक्दैनन्। तर कसरी राम्रोसँग स्वादिष्ट व्यञ्जनहरू तयार गर्ने ताकि तिनीहरू स्वस्थ छन्? त्यहाँ धेरै व्यञ्जनहरु अनलाइन छन्, तर म तपाई संग केहि साझा गर्न चाहन्छु।
© 2022 खाना पकाउने व्यञ्जनहरू